कोर्नस कौसा बारे सबै, भव्य फूलहरु संग एक रूख | सबै रूखहरू
मोनिका सान्चेज | | सजावटी रूखहरू, फिचस, पर्णपाती सजावटी
छवि - विकिमेडिया / जीन-पोल ग्रान्डमोंट
डगवुडहरू बिरुवाहरूको समूह हो जसमा चारवटा ब्र्याक्टहरू (झूटा पंखुडीहरू), ठूला र सेतो वा गुलाबी र साथै शरद ऋतुको भव्य रंग भएका फूलहरू हुन्छन्। तर यो रूख को बारे मा एक ब्लग भएकोले, हामी तपाई संग कुरा गर्न जाँदैछौं cornus koussa, मेरो लागि सबैभन्दा सजावटी प्रजातिहरू मध्ये एक, तर मौसम पूर्ण रूपमा अनुकूल नभएको बेला अझ नाजुक।
त्यसकारण, यो डगवुड को आवश्यकता के हो? हामी यसलाई कसरी बगैचा सजाउन सक्छौं? के यसलाई भाँडोमा राख्न सम्भव छ? यी र अन्य प्रश्नहरूको जवाफ तल दिइनेछ।
1 Cornus kousa को उत्पत्ति र विशेषताहरु
2 के तपाईं यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ?
3 Kousa dogwood को हेरचाह कसरी गर्ने?
3.2 माटो वा सब्सट्रेट
3.5 छाँट्ने काम
उत्पत्ति र को विशेषताहरु cornus koussa
कौसा डगवुड यो एक पातलो रूख हो मूल रूपमा पूर्वी एशियाबाट, अझ सटीक हुन, जापान, चीन र कोरियाबाट। १ र १. meters मिटरको उचाईमा पुग्छ, र समय संग यो एक गोलाकार र चौडा मुकुट विकास गर्दछ, लगभग4मिटर सम्म पुग्छ। यसको पातहरू साधारण छन्, लगभग 10 सेन्टिमिटर लामो, र हरियो, यद्यपि तिनीहरू शरद ऋतुमा सुन्तला र/वा रातो हुन्छन्।
यो वसन्त भर फुल्छ। यसको शाखाहरु को धेरै संख्यामा सेतो फूलहरू अंकुर्छन् तिनीहरू लगभग4सेन्टिमिटर चौडा मापन गर्छन्। र एक पटक तिनीहरू परागकित भएपछि, फलहरू पाक्छन्, जुन लगभग3सेन्टिमिटर गुलाबी जामुन हो। यी खाद्य हुन्, र गर्मीको अन्त्य वा पतनमा काट्न सकिन्छ।
के तपाईं यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ?
हाम्रो नायकसँग धेरै प्रयोगहरू छन्, जुन निम्न हुन्:
सजावटी: या त पृथक नमूनाको रूपमा वा समूहहरूमा, यो एउटा रूख हो जसले बगैंचालाई ठूलो रूपमा सजाउँछ, र अझ के हो भने, यसले व्यावहारिक रूपमा सबै वर्षभर गर्छ, पहिले वसन्तमा फूलहरूले भरिन्छ, र त्यसपछि शरद ऋतुमा रातो हुन्छ।
बोन्साई: सबै डगवुडहरू बोन्साईको रूपमा काम गर्ने बिरुवाहरू हुन्। हार्डी अन्य आकर्षक फूल फुल्ने रूखहरू जस्तो नभई, उदाहरणका लागि फ्ल्याम्बोयन्ट जस्तै, तिनीहरू बोन्साई ट्रेमा हुर्कँदा कुनै समस्या बिना फस्टाउँछन्।
खाद्य: यसको जामुन रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
Kousa dogwood को हेरचाह कसरी गर्ने?
यदि तपाईं एक रमाईलो गर्न चाहनुहुन्छ भने cornus koussa, पहिले तपाईंले तिनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ:
उपयुक्त मौसम: मिजासिलो; त्यो हो, वसन्तमा हल्का तापक्रम र शरद ऋतु सम्म, र जाडोमा मध्यम फ्रस्ट र हिमपातको साथ। त्यस्तै गरी, वातावरणीय आर्द्रता उच्च हुनुपर्दछ, किनकि यो कम हुँदा धेरै पीडा हुन्छ (पातहरू निर्जलीकरण)।
फ्लोर: अम्लीय वा थोरै अम्लीय (यसको pH4र 6.5 बीचको हुनुपर्छ), जैविक पदार्थले भरिपूर्ण र उत्कृष्ट जल निकासी भएको। यो एक रुख हो जसले आफ्नो जरामा बढी पानी सहन सक्दैन।
वर्षा: वर्षभरि रेकर्ड हुनुपर्छ।
र अब यसको हेरचाह कसरी गर्ने हेरौं:
यो बाहिर राख्नु पर्छ, तर घमाइलो वा छायादार ठाउँमा? यो मौसम मा धेरै निर्भर हुनेछ: यदि यो हल्का गर्मी र चिसो जाडोको साथ समशीतोष्ण छ भने, यदि वातावरणीय आर्द्रता उच्च छ भने यो सूर्यको सम्पर्कमा आउन सक्छ।। अर्कोतर्फ, यदि यो न्यानो शीतोष्ण छ, गर्मीमा 35ºC माथिको तापक्रम र जाडोमा धेरै हल्का फ्रस्टको साथ, उदाहरणका लागि भूमध्यसागरको तटमा धेरै बिन्दुहरूमा जस्तै, यसलाई अर्ध-छायामा राख्नु राम्रो हुनेछ। वा छायाँ, तातो महिनाहरूमा कम किनभने इन्सोलेशनको डिग्री धेरै उच्च हुन सक्छ र फलस्वरूप, पातहरू जल्न सक्छ।
माटो वा सब्सट्रेट
हामीले उल्लेख गरे अनुसार माटोको pH4र 6.5 बीच हुनुपर्छ। अरु के छ त, उर्वर र हल्का हुनुपर्छ, यदि यो धेरै कम्प्याक्ट र/वा भारी छ भने, जराहरू राम्ररी बढ्दैनन्, र ती माटोमा खराब हावा परिसंचरणको कारणले निसास्सन पनि सक्छ। त्यसकारण, यदि हामीसँग भएको जमिन उपयुक्त छैन भने, हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, कि त यसलाई अम्लीय बनाउनको लागि गोरा पीट थपेर र/वा ड्रेनेज सिस्टम स्थापना गरेर। जे भए पनि, र यसले छाँट्ने सहन सक्ने भएकोले, यदि हामीसँग माटोको माटो छ भने, यसलाई भाँडोमा रोप्नु राम्रो हुन्छ, किनकि यदि हामीले ठूलो प्वाल बनायौं भने पनि, ढिलो वा चाँडो जराले मूल माटोलाई छुनेछ, र त्यसपछि समस्याहरू। सुरु हुनेछ..
यदि भाँडोमा राख्ने हो भने कुन सब्सट्रेट राख्ने? यो सजिलो छ: अम्लीय बिरुवाहरूको लागि कुनै पनि विशिष्ट माटो, कसरी यो एक फूल, वा नरिवल फाइबर (बिक्रीको लागि यहाँ)। यदि तपाइँ यसलाई बोन्साईको रूपमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, हामी 70% कानुमासँग 30% अकडामा मिश्रण गर्न सिफारिस गर्छौं।
El cornus koussa खडेरी प्रतिरोध गर्दैन। पानी परेको अवस्थामा, सामान्यतया गर्मीमा हप्तामा 2-3 पटक (अर्थात प्रत्येक2वा3दिनमा) र वर्षको बाँकी भागमा हप्तामा एक वा दुई पटक पानी हाल्नु पर्छ। तर यो हावापानी, स्थान, र यो जमिनमा होस् वा भाँडोमा धेरै निर्भर हुनेछ, किनकि यसलाई मल्लोर्काको दक्षिणमा समान फ्रिक्वेन्सीमा पानी दिइनेछैन (जहाँ हामी बिना छ महिनासम्म बिताउन सक्छौं। वर्षा देख्दै), ग्यालिसिया जस्तै (जहाँ यो भूमध्य टापु भन्दा धेरै पटक वर्षा हुन्छ)।
यदि तपाइँसँग शंका छ भने, हामी तपाइँलाई माटोको आर्द्रता जाँच गर्न सिफारिस गर्दछौं, तल काठको छडी घुसाउनुहोस्। यदि यो धेरै माटो जोडेर बाहिर निस्कन्छ भने, यसको मतलब यो हुनेछ कि यसलाई अझै पानी आवश्यक छैन। साथै, यदि हामी यसलाई भाँडामा राख्छौं भने, यसलाई पानी हाल्नु पर्छ वा छैन भनेर जान्नको अर्को तरिका यो हो कि यसलाई एक पटक पानी दिए पछि लिनुहोस्, र केहि दिन पछि। सुख्खा माटोको तौल भिजेको माटोभन्दा कम भएको हुनाले, तौलमा भएको यो भिन्नताले गाइडको रूपमा काम गर्नेछ।
छवि - फ्लिकर / जेम्स सेन्ट जोन
वसन्त देखि ढिलो गर्मी सम्म कुखुराको मल, कम्पोस्ट वा ग्वानो जस्ता मलहरू तिर्नु उचित हुन्छ। यद्यपि यदि यो भाँडोमा छ भने, एसिड बिरुवाहरूको लागि विशेष तरल उर्वरकहरू प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ, जस्तै यो उदाहरणका लागि युद्धबाट। तर हो, प्रयोगको लागि निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् ताकि समस्याहरू उत्पन्न हुँदैन।
यदि हामी यसलाई बगैंचामा राख्न जाँदैछौं भने, म यसलाई छाँट्ने सल्लाह दिँदिन। यस रूखको सुन्दरता यसको आकार, यसको भव्यता हो। तर यदि तपाईंसँग सुख्खा हाँगाहरू छन् भने, हो, हामी तिनीहरूलाई हटाउन सक्छौं।
चीजहरू परिवर्तन हुन्छन् जब तपाईं यसलाई भाँडोमा राख्न जाँदै हुनुहुन्छ, कि त तपाईंसँग बगैंचा छैन किनभने, माटो ठीक छैन, वा तपाईंलाई यो जस्तै महसुस हुन्छ। यस अवस्थामा, छाँट्नु आवश्यक छ। यो जाडोको अन्त्यमा वा शरद ऋतुमा गरिनेछ, र समावेश हुनेछ:
सुख्खा र भाँचिएको शाखाहरू हटाउनुहोस्।
धेरै अग्लो हुने कुनै पनि पछाडि काट्नुहोस्।
कपलाई अंडाकार आकार दिनुहोस्।
यो जाडोको अन्त्यमा गरिनेछ, पहेँलो "फुल्न" सुरु हुनु अघि वा केही समय पछि। तर हो, यदि यो राम्रोसँग जरा छ भने मात्र यसलाई भाँडोबाट हटाइनेछ। अर्थात्, यदि जराहरू ड्रेनेज प्वालहरूबाट बाहिर निस्कन्छ र/वा यदि यसलाई हटाउने प्रयास गर्दा, जराको बल नछुटाई पूरै बाहिर निस्कन्छ।
छवि - विकिमीडिया/राफेल एन्ड्रेस
यो जाडोमा बीउहरूद्वारा गुणा हुन्छ, किनकि तिनीहरू अंकुरण हुनु अघि चिसो हुनुपर्दछ, र वसन्तमा काटेर।
यो ढिलो नभएसम्म -18ºC सम्म फ्रस्ट प्रतिरोध गर्दछ, किनकि एक पटक मौसम सुधार गर्न थाल्छ, यो तुरुन्तै अंकुरिन्छ, र तापमान मा अचानक गिरावट को घटना मा यो गाह्रो समय छ।
यदि यो छायामा छ र यसमा पानीको कमी छैन भने, यदि समयमै रेकर्ड गरिएको छ भने यसले 38ºC सम्मको मानको साथ तातो लहरलाई पनि सामना गर्नेछ।
तपाईले के सोच्नु भयो cornus koussa?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » Kousa dogwood (कोर्नस kousa)